Warar faahfaahsan oo la xiriira qaabka ay u dhacdey maxaabiistii laga siideyey Muqdisho – SBC
Warar faahfaahsan oo la xiriira qaabka ay u dhacdey maxaabiistii laga siideyey Muqdisho
Madaxweynaha DKMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta cafis u fidiyey maxaabiis u dhalatey wadamada Mareykanka, Britain & Kenya, kuwaasi oo maxkamad ku taal magaalada Muqdisho ay ku xukuntey xabsi isagu jira 15 sano & 10 sano ka dib markii lagu eedeeyey inay dalka ku soo galeen sharci daro ayna sideen lacago cadaan ah oo doolar ah.
Maxaabiistan oo ka kooban 6 qof ayaa isagu jira sadex British ah, Laba Kenyaati ah iyo mid Mareykan ah, waxaana la sheegay in uu madaxweynuhu cafiska siideyntooda ku siidaayey.
Warar SBC ay ka heshay ilo diblumaasiyadeed oo codsadey in magacooda saxaafada laga sheego ayaa xusey in siideynta maxaabiistan ay ka dambeysay xiriiro dhexmarey dawlada KMG & wasaaradaha arimaha dibada ee Mareykanka & Ingiriiska.
Sarkaal ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya oo codsadey in aan magaciisa saaxaafada laga sheegin sababo uu ku macneeyey inaan loo ogoleyn in uu hadal siiyo saxaafada ayaa u sheegay SBC in uu jirey xiriir maalmahan u socdey madaxweyne Shariif Sheekh Axmed & masuuliyiin ka tirsan xukuumada British-ka gaar ahaan xafiiska arimaha dibada, inkastoo aanu sheegin magacyada dadkaasi.
Ilo wareed lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dawlada KMG shuruud ku xirtey siideynta dadkaasi in lacagta 3600,000 (Sadex milyan & lix boqol kun ) ee doolar ay si buuxda ula wareegayso dawlada maadama maxkamadu xukuntey, waxaa kale oo dawladu sheegtey in min 50 kun oo doolar ay ku ganaaxdey labadii diyaaradood ee lagu qabtey garoonka Muqdisho ee siday lagacaha & ajaanibta, diyaaradahaasi oo laga leeyahay wadanka Kenya.
Wararka laga helayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in labadii diyaaradood ay mid ka mid ah horey u sii qaaday maxaabiistii ajaaniibta ee cafiska Madaxweyne lagu siidaayey, iyadoo diyaaradii kalena ay sidoo kale ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.